" ဆေးမြစ်စုံရောင်းနေတဲ့၈၄နှစ်အရွယ်အဘွားအတွက် အလှူ​ေငွ၁သိန်းအပြင် ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုအတွက်အရင်းအနှီးအဖြစ်၁သိန်းကျပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးစက်'' - Cele Gabar
” ဆေးမြစ်စုံရောင်းနေတဲ့၈၄နှစ်အရွယ်အဘွားအတွက် အလှူ​ေငွ၁သိန်းအပြင် ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုအတွက်အရင်းအနှီးအဖြစ်၁သိန်းကျပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးစက်”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ မိုးစက်ကတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစားသောက်နေရကာခက်ခဲနေတဲ့ သူတွေကိုအဓိကထားကာ ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်လက်ပါ။ သူ့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဟာပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်ရှိကာ ကြည်နူးပီတိဖြစ်ကြရတာအမှန်ပါပဲနော်။လက်ရှိမှာလည်း”သားလေးရေ အဖွားတစ်ယောက်တုန်တုန်ရီရီလေးနဲ့စျေးရောင်းနေတာ တွေ့လို့ သားအခုလာကြည့်ပေးလို့ ရလား …???ဖေကြီးဦးမိုးဒီ မနက်(၇:၃၀)လောက်ဖုန်းဆက်တော့ကပြာကယာ အဖွားရှိတဲ့နေရာကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ဖွားဖွား ဘာတွေရောင်းတာလဲ…”ဒါက တောင်နံကြီး ၊ ဒါကဆေးမြစ်ဆုံ …ဒါလေးက အုန်းဆီ …”ဟုတ်ကဲ့ ဖွားဖွားရောင်းတာကို အားပေးချင်လို့ပါ…နာမည်ရော ဘယ်လိုခေါ်လဲ …”
“ဒေါစိမ်း ပါ သား…”အသက်ကရော …”၈၄ နှစ်ပါ…”ဟုတ် ဖွားဖွား တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘယ်လောက်ဖိုးလောက် ရောင်းရပြီးအမြတ်ကျန်လဲ…”အရင်းဘာညာဖယ်လိုက်ရင်တော့ ထောင် လောက်တော့ ကျန်ပါတယ်…”ဒါတွေအကုန်လုံး ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားမလဲဖွားဖွား…၅ထောင် ဘဲ ပေးပါသား…”အဲ့ဒါဆို သား ၅ထောင်ပေးလိုက်မယ်နော်…”လှူတော့မှာ ကြိုသိနေတဲ့ ဖေကြီးဦးမိုးဒီ ကပြုံးစိစိ နဲ့ 😁😅ပေးလိုက် ပေးလိုက်…”“ရော့ဖွားဖွား တစ်သိန်းကျပ် …”“ဪ အများကြီးဘဲ…”ပိုက်ဆံတွေ အကုန်လုံး ပေးတာပါ ဖွားဖွား ..”အကုန်လုံး မတန်ပါဘူး သားရယ်..”ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖွားဖွား တမင်ချစ်လို့ ဂုဏ်ပြုပေးတာပါ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်..”ဒီလိုနဲ့ နေ့လည်ဘက်ရောက်တော့အမတော်မြနန်းနွယ် နန်းမှာ ပွဲသွားပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတံခါးဝ မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အမတော်နန်းက စွန့်ထားတဲ့ အအေးဗူးလေးများကျန်သေးလားဟင် ကျွန်မသားလေး အရမ်းပူနေလို့တိုက်ချင်လို့ပါ ..”
နန်းက ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့ဝင်တွေကလဲ သနားပြီး စွန့်ထားတဲ့ အအေးဗူတွေပေးလိုက်တယ် ။ကျွန်တော်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မပြီး ဒီသားအမိအကြောင်းကို ထပ်ပြီး စပ်စုမိတာပေါ့…။အစ်မ ဘာတွေရောင်းတာလဲ…”အသုတ်စုံနဲ့ သရက်သီးသုပ်ပါ..”အသုပ်စုံဗန်းကို ပုဆိုးလေးနဲ့ထုပ်ထားတာကဘယ်လိုမှ စားချင်စဖွယ်မကောင်းပေ ။အစ်မရယ် ဒါလေးတွေ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့လုပ်ပြီးရောင်းရင် ရောင်းရမှာ…”ကျွန်မလဲ ကလေးတစ်ဖက်နဲ့အပြင်အရင်းအနှီးကလဲ နည်းနေတော့ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေလို့ပါ…”“ကဲ ဒီလိုလုပ် အရင်းထုပ်ပေးခဲ့မယ်နော်နောက်ဆို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လေးလုပ်ပြီးရောင်းနော်ကျွန်တော် လာကြည့်မှာနော်…”ကျွန်တော်ဒီမိသားစုအတွက် တစ်သိန်းထပ်လှူပေးခဲ့ပါတယ် ။အိမ်လခ နှစ်သောင်း အပြင် ယောကျ်ားက ဆန်ထမ်း(ကျပန်း) အလုပ်နဲ့ဆိုတော့မိသားစုလေးခမျာ အဆင်မပြေနိုင်ရှာဘူးပေါ့ယနေ့လှူဒါန်းမှူအား မသီရိစိုး ၏ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် တစ်သိန်းကျပ်နှင့်ကျွန်တော်နှင့် အလှူရှင်များရဲ့စုပေါင်းအလှူငွေအဖြစ် နောက်တစ်သိန်းကျပ်အားလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့အလှူရှင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့တနေ့ထဲမှာအလှူနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း မိုးစက်နဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့ကုသိူလ် အလှူအတွက်သာဓုခေါ်ခဲ့ပါဦးနော်။
” ေဆးျမစ္စုံေရာင္းေနတဲ့၈၄ႏွစ္အ႐ြယ္အဘြားအတြက္ အလႉ​ေငြ၁သိန္းအျပင္ ခက္ခဲေနတဲ့မိသားစုအတြက္အရင္းအႏွီးအျဖစ္၁သိန္းက်ပ္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ မိုးစက္”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ မိုးစက္ကေတာ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ေနရကာခက္ခဲေနတဲ့ သူေတြကိုအဓိကထားကာ ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္လက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာပရိသတ္ေတြရင္ထဲကိုေရာက္ရွိကာ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ၾကရတာအမွန္ပါပဲေနာ္။လက္ရွိမွာလည္း”သားေလးေရ အဖြားတစ္ေယာက္တုန္တုန္ရီရီေလးနဲ႔ေစ်းေရာင္းေနတာ ေတြ႕လို႔ သားအခုလာၾကည့္ေပးလို႔ ရလား …???ေဖႀကီးဦးမိုးဒီ မနက္(၇:၃၀)ေလာက္ဖုန္းဆက္ေတာ့ကျပာကယာ အဖြားရွိတဲ့ေနရာကို ထြက္လာခဲ့တယ္။ဖြားဖြား ဘာေတြေရာင္းတာလဲ…”ဒါက ေတာင္နံႀကီး ၊ ဒါကေဆးျမစ္ဆုံ …ဒါေလးက အုန္းဆီ …”ဟုတ္ကဲ့ ဖြားဖြားေရာင္းတာကို အားေပးခ်င္လို႔ပါ…နာမည္ေရာ ဘယ္လိုေခၚလဲ …”“ေဒါစိမ္း ပါ သား…”အသက္ကေရာ …”၈၄ ႏွစ္ပါ…”ဟုတ္ ဖြားဖြား တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဘယ္ေလာက္ဖိုးေလာက္ ေရာင္းရၿပီးအျမတ္က်န္လဲ…”အရင္းဘာညာဖယ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေထာင္ ေလာက္ေတာ့ က်န္ပါတယ္…”ဒါေတြအကုန္လုံး ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္ထားမလဲဖြားဖြား…၅ေထာင္ ဘဲ ေပးပါသား…”အဲ့ဒါဆို သား ၅ေထာင္ေပးလိုက္မယ္ေနာ္…”လႉေတာ့မွာ ႀကိဳသိေနတဲ့ ေဖႀကီးဦးမိုးဒီ ကၿပဳံးစိစိ နဲ႔ 😁😅ေပးလိုက္ ေပးလိုက္…”
“ေရာ့ဖြားဖြား တစ္သိန္းက်ပ္ …”“ဪ အမ်ားႀကီးဘဲ…”ပိုက္ဆံေတြ အကုန္လုံး ေပးတာပါ ဖြားဖြား ..”အကုန္လုံး မတန္ပါဘူး သားရယ္..”ဘယ္ဟုတ္မလဲ ဖြားဖြား တမင္ခ်စ္လို႔ ဂုဏ္ျပဳေပးတာပါ…ေက်းဇူးတင္ပါတယ္သားရယ္..”ဒီလိုနဲ႔ ေန႔လည္ဘက္ေရာက္ေတာ့အမေတာ္ျမနန္းႏြယ္ နန္းမွာ ပြဲသြားေပးတဲ့အခ်ိန္အဲ့ဒီတံခါးဝ မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အမေတာ္နန္းက စြန္႔ထားတဲ့ အေအးဗူးေလးမ်ားက်န္ေသးလားဟင္ ကြၽန္မသားေလး အရမ္းပူေနလို႔တိုက္ခ်င္လို႔ပါ ..”နန္းက ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ဝင္ေတြကလဲ သနားၿပီး စြန္႔ထားတဲ့ အေအးဗူေတြေပးလိုက္တယ္ ။ကြၽန္ေတာ္လဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မၿပီး ဒီသားအမိအေၾကာင္းကို ထပ္ၿပီး စပ္စုမိတာေပါ့…။အစ္မ ဘာေတြေရာင္းတာလဲ…”အသုတ္စုံနဲ႔ သရက္သီးသုပ္ပါ..”အသုပ္စုံဗန္းကို ပုဆိုးေလးနဲ႔ထုပ္ထားတာကဘယ္လိုမွ စားခ်င္စဖြယ္မေကာင္းေပ ။အစ္မရယ္ ဒါေလးေတြ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေလးနဲ႔လုပ္ၿပီးေရာင္းရင္ ေရာင္းရမွာ…”ကြၽန္မလဲ ကေလးတစ္ဖက္နဲ႔အျပင္အရင္းအႏွီးကလဲ နည္းေနေတာ့ ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပလို႔ပါ…”
“ကဲ ဒီလိုလုပ္ အရင္းထုပ္ေပးခဲ့မယ္ေနာ္ေနာက္ဆို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေလးလုပ္ၿပီးေရာင္းေနာ္ကြၽန္ေတာ္ လာၾကည့္မွာေနာ္…”ကြၽန္ေတာ္ဒီမိသားစုအတြက္ တစ္သိန္းထပ္လႉေပးခဲ့ပါတယ္ ။အိမ္လခ ႏွစ္ေသာင္း အျပင္ ေယာက်္ားက ဆန္ထမ္း(က်ပန္း) အလုပ္နဲ႔ဆိုေတာ့မိသားစုေလးခမ်ာ အဆင္မေျပႏိုင္ရွာဘူးေပါ့ယေန႔လႉဒါန္းမႉအား မသီရိစိုး ၏ ေမြးေန႔အလႉအျဖစ္ တစ္သိန္းက်ပ္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားရဲ႕စုေပါင္းအလႉေငြအျဖစ္ ေနာက္တစ္သိန္းက်ပ္အားလႉဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ ပါဝင္လႉဒါန္းၾကတဲ့အလႉရွင္မ်ားအားလုံးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔တေန႔ထဲမွာအလႉႏွစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း မိုးစက္နဲ႔အလႉရွင္ေတြရဲ႕ကုသိူလ္ အလႉအတြက္သာဓုေခၚခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post ပရဟိတ မျက်မမြင်ပညာသင်ကျောင်းအတွက် မုန့်တွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်
Next post ” ကိုယ်ဝန်စရှိကတည်းကရင်သွေးလေးအတွက်အလုပ်တွေပိုလုပ်ပြီး ပိုကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်”